Oniversite Issup Manao fiofanana”initiale” sy “continue” ho an’ny mpiasa sy mpianatra
Mitsinjo ireo mpiasa manana traikefa amin’ny asa ataony ka mbola te hampitombo ny fahaizany ny sekoly ambony Issup na “Institut Superieur Privé Professionnel” etsy Behoririka.
Toa izay ihany koa ireo mpianatra taona fahatelo, mianatra ny taranja fitantanana ary manomana ny “licence professionnelle”, hidirana eo amin’ny sehatry ny asa amin’ny tsy miankina na fanjakana. Natokana ho an’ny mpianatra taona fahatelo sy ny mpiasa io fiofanana “initial” sy “contenue” omen’ny sekoly io. Isan’andro no mianatra ny mpianatra manaraka io fiofanana “initiale” io, fa ny “contenue” kosa dia isaka ny sabotsy ary mividy boky amin’ny vidiny mirary ny mpianatra.
Sampam-piofanana maromaro no hita amin’ireo fiofanana ireo, toa ny fitantanana ahitana ny GRH na “Géstion Ressources Humaines”, “Comptabilité et Finances” ary “Marketing et Action Commerciale”. Nambaran’ny talen’ny sekoly Ramiandrisoa Lalaina fa hiditra eo amin’ny sehatry ny matihanina amin’ny fampianarana ny sekoly, ka antony iray anomezan’izy ireo ny fiofanana ho an’ny mpianatra sy mpiasa.